Kpọtụrụ - Rikoooo
107 chemin Gaillard du mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri
Chefuru okwuntughe gị ? Pịa ebe a
Ichezọ aha njirimara gị? Pịa ebe a
Anyị na-asụ French na Bekee naanị
DỊ mKPA tupu ịkpọtụrụ anyị, biko lelee anyị FAQ anyị nwere ike zaaworị ajụjụ gị. Maka isiokwu ndị metụtara teknuzu na faịlụ anyị anyị anaghị ekwe gị nkwa nzaghachi ma ọlị, n'agbanyeghị, anyị na-eme ike anyị ịza arịrịọ gị mgbe anyị anaghị arụgbu ọrụ. Cheta, anyị na-akwado ihe karịrị otu puku faịlụ, anyị enweghị ike ịnye nkwado maka gị niile, ohere kachasị gị bụ ịkpọtụrụ ndị edemede ozugbo.
Anyị na-atụ aro ka ị kpọtụrụ anyị site na adreesị ozi-e webmaster@rikoooo.com ọkachasị ma ọ bụrụ na ịchọrọ zitere anyị mgbakwunye. I nwekwara ike isi na Facebook were soro anyị kparịta ụka https://m.me/RikooooSimu
Tinye aha gị: (*)
SVP mettez une valeur wụsa "Saisissez votre nom:".
Aha ojii Rikoooo (nhọrọ)
Nke a na ozi bụ banyere:(*)
My otu akaụntụMy Jumbo ndenye ahaAn add-onThe forumNdị ọzọ ghara ịdị irè ọsọ ọsọ
Object nke ozi gị: (*)
SVP mettez une valeur wụsa "Objet du ozi:".
Tinye ozi: (*)
SVP mettez une valeur wụsa "Saisissez votre ozi:".
Agụọla m ma nabata na azịza ọ bụla anaghị ekwe nkwa ọ bụla maka ajụjụ gbasara nkwado ọrụ ma ọ bụ arịrịọ metụtara add-ons
Mustkwesịrị ịnakwere ọnọdụ anyị
Captcha (nọmba 6)(*)
Refresh ghara ịdị irè ọsọ ọsọ
Dee nọmba isii ị hụrụ n’onyinyo a